Ny fampiharana Android efatra tsara indrindra hialana amin'ny sigara | Androidsis
Fampiharana Android tsara indrindra hialana amin'ny sigara
Olona an-tapitrisany no te hiala amin'ny sigara. Na dia ny zava-misy aza dia tsy mora velively izany, izany no mahatonga azy ireo matetika mampiasa fanampiana amin'ny tranga maro. NY Ny telefaona Android koa dia mety hanampy betsaka amin'ity karazana toe-javatra ity. Satria manana fangatahana misy izahay izay manampy anay hiala amin'ny sigara. Ka mety hahaliana ny mpampiasa sasany izy ireo.
Tokony ho hitantsika ireo fampiharana Android ho fanohanana fanampiny. Azontsika atao ny mampiasa azy ireo ho fanampiana fanampiny hahafahana manajanona ny fifohana sigara maharitra. Ka ho an'ireo olona manaraka an'io lalana io dia mety mahasoa izy io.
Ny fisafidianana ireo karazana fampiharana Android ireo dia nitombo rehefa nandeha ny fotoana. Ao amin'izy ireo no ahitantsika ny rindranasa avo lenta izay afaka manampy betsaka an'ireo olona te hiala. Noho izany, eto ambany izahay dia mamela anao amin'ny tsara indrindra izahay.
1 QuitNow! Mialà amin'ny sigara
2 Tsy mifoka sigara - miala amin'ny sigara
4 Atsaharo kely ny fifohana sigara
QuitNow! Mialà amin'ny sigara
Manomboka amin'ity rindranasa ity izahay izay mety ho ny safidy tsara indrindra mety ho hitantsika ao amin'ny Play Store androany. Hanampy antsika hanara-maso an'ity dingana ity, hahafahantsika mifehy ny faharetan'ny fotoana tsy nifohana sigara. Ary koa, manome fanohanana be dia be izahay, satria misy vondron'olona ao amin'ilay fangatahana. Azonao atao ny mifandray amin'ireo olona mandalo toe-javatra mitovy amin'izany. Noho izany dia tsy mahatsiaro ho irery ianao ary misy ny fifanohanana amin'ireo tranga ireo. Manome antsika fampahalalana marobe ihany koa momba ny fanatsarana ny fahasalamantsika. inona ny fihetsika miala amin'ny sigara. Ho fanampin'izany, asehony antsika koa ny vola angoninay isaky ny fonosana sigara izay tsy novidianay. Fanentanana tsara koa.
Tsy mifoka sigara - miala amin'ny sigara
Amin'ny toerana faharoa dia ahitantsika ity fampiharana hafa ity izay mitovy amin'ny voalohany. Izy io no hiandraikitra ny fitandremana ny lisitry ny fivoarantsika mandritra io fizotran-javatra io. Izy ireo dia hampiseho amintsika ny angona momba ny fahasalamana, izay azontsika amin'ny fahasalamana ary izy ireo ihany koa dia hanolotra tanjona ho antsika. Amin'izany no ahafahantsika mahatratra tanjona tsikelikely, amin'ny fomba manamora ny fahafahantsika afaka miala amin'ny sigara maharitra. Izy ireo koa dia hampiseho amintsika hoe ohatrinona ny vola angonintsika amin'ity dingana ity. Ny interface tsara dia noforonina, mba ho tsotra sy ahazoana aina tokoa ny afaka mihetsika manodidina ilay rindranasa.
Fampiharana fanta-daza iray hafa any Espana no safidy fahatelo ity. Fampiharana ofisialy an'ny Fikambanana Espaniola Miady amin'ny homamiadana (AECC). Amin'ity tranga ity dia somary misy fampahalalana bebe kokoa izy io, satria mampiseho amintsika andiana fahazarana mihinana amin'ny fomba manokana. Inona koa, mametraka fanamby kely ho antsika ary mahazo zava-bita rehefa mahazo azy ireo isika. Ka manome antsika antony manosika kely ihany koa amin'io lafiny io hahafahantsika miala amin'ny sigara. Ho fanampin'izay, manana faritra fanampiana izahay manome tetika handresena ny fanahiana izy ireo izay mahatonga ny sigara hiala.
Ity fampiharana Android ity azo sintomina maimaim-poana. Ary koa, tsy misy fividianana na dokam-barotra ao anatiny.
Respirapp - Mifoka sigara
Developer: Teknolojia AECC
Atsaharo kely ny fifohana sigara
Na dia tsy tsara indrindra aza ilay anarana (indrindra noho ny fandikan-teny), miatrika fampiharana tena ilaina izahay rehefa miala amin'ny sigara. Rindrambaiko izay miasa somary hafa. Satria manana a famantaranandro fijanonana izay hanompo antsika handrefesana ireo fotoana ahafahantsika mifoka sigara mifototra amin'ny isan'ny sigara mifoka isan'andro. Ny hevitra amin'ity fampiharana ity dia ajanony tsikelikely ny fifohana sigara. Mifanohitra amin'ny fampiharana hafa. Ka ho an'ny olona sasany dia mety hanampy izany. Satria kely ny fiantraikany ary mora kokoa izy io.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia manana doka ao anatiny aza izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana Android tsara indrindra hialana amin'ny sigara
Sivanina ny antsipirian'ny tanora Vivo V9
Ahoana ny fomba hampiasana ny maody havia amin'ny Android